[Na vidiyo] Otu esi enwe pointer na virtual pad na Galaxy Note 10 + (na ndị ọzọ Galaxy) | Gam akporosis
[Na] Otu esi enwe pointer na virtual pad na Galaxy Note 10 + (na ndị ọzọ Galaxy)
Ekele diri Otu Aka + anyị ga-enwe ike nwere pointer na mebere pad na Galaxy Note 10+ Ma, n'ezie, na Galaxy ndị ọzọ dịka S10, S20 na ndị ọzọ. A ọhụrụ mma nke rutere na ọhụrụ update nke a oké ngwa.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka a pointer dị ka òké na PC. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị nwere obere aka ma ọ bụ na ọ na-esiri gị ike iru isi ihe ndị ọzọ na ihuenyo ụlọ nke mkpanaka gị, yana pointer a na ọbụna padị mebere, ị ga-enwe ike ịme ya n'enweghị nsogbu; tumadi ọ bụrụ na ọ masiri anyị ijikwa otu aka.
Etu ị ga-esi nwee pointer na padụl mebere na Galaxy Note10 +
Anyị ga-emerịrị ka o doo anya na anyị ga-enwe ike iji otu mmegharị ahụ rụọ ọrụ ma ọ bụ mezie pad nke mebere pad ahụ mebere. Site na ndabara na Otu Aka Ọrụ + ihe nhọrọ a na-etinye na akụkụ aka nri ala ma enwere ike ịchọta ya dị mfe ịbụ ọkara opaque; n'agbanyeghị, echefula na kacha mma Good mkpọchi ngwa 2020 a video.
Gaa maka ya. Wụnye ngwa ahụ:
Otu Aka oru +
Developer: Samsung Eletrọniki Co., Ltd.
Ugbu a, ka anyị kpebie ihe ga-abụ mmegharị ahụ nke anyị ji rụọ ọrụ kọntaktị ahụ na akara aka. Anyị ga-egosi gị otu esi hazie ya, mana ị nwere onye ahọpụtara dị na ala aka nri.
Site na ndepụta na-egosi na anyị na-aga na njedebe na anyị hụrụ «aka panel mebere. Anyị na-ahọrọ ya ma ugbu a, anyị ga-ekenye pad a na mmegharị ahụ ahọpụtara.
Anyị na-eme mmegharị ahụ ma na mpe mpe akwa ejiri pointer na ihuenyo ahụ rụọ ọrụ.
Na-ahapụ ịhapụ mkpịsị aka gị, anyị nwere ike iji pointer gafere site na ụlọ ma ọ bụ desktọọpụ nke ekwentị anyị.
Banyere mpempe akwụkwọ mebere, kwenye n'eziokwu na ị nwere ike gbanwee ọnọdụ site na bọtịnụ nke ya, ma obu n’elu ma obu n’aka ekpe. Anyị nwekwara ike pịa otu pad ahụ dị ka a ga - asị na ọ bụ pịa ma emesia anyị nwere ala iji gaa n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe.
Ohere ọzọ mpe mpe mpe akwa bụ iji ya mbugharị na ihe anyị na-ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ blog anyị. Na mpempe, na i nwere site na ukara Samsung ngwa-ekwe omume nke eji pointer na mebere na mpe mpe akwa iji nweta nkasi obi niile n'ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » [Na] Otu esi enwe pointer na virtual pad na Galaxy Note 10 + (na ndị ọzọ Galaxy)
N'oge na-adịghị anya mgbe m matara 5G smartphone sitere na Realme: gịnị ka anyị ga-atụ anya ya?
A na-etinye igwefoto Galaxy S20 Ultra na nyocha DxOMark ọhụrụ